डा. डीआर उपाध्यायको ‘माया प्रितीको…’ बोलको गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित) « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
डा. डीआर उपाध्यायको ‘माया प्रितीको…’ बोलको गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)
१३ असार २०७६, शुक्रबार १०:४४
काठमाडौं : डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘माया प्रितीको…’ सार्वजनिक भएको छ । प्रविशा अधिकारी र सागर अधिकारी ‘शरद’को स्वर, सागरकै सङ्गीत र शाहस शाक्यको एरेञ्ज रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
वसन्त सापकोटाको निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा नायिका अनु पराजुली र डा. डीआरलाई फिचरिङ गरिएको छ । अर्जुन सापकोटाको छायाँकन रहेको गीतको भिडियोलाई अनिल कुमार महर्जनले सम्पादन गरेका छन् । गीत जति राम्रो छ गीतको भिडियो पनि त्यतिकै राम्रो बनेको छ ।
गत हप्ता गीतकार सङ्घ नेपालको नवौँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा डा. डीआर उपाध्यायलाई वर्ष ‘वर्ष गीत पुरस्कार’बाट पुरस्कृति गरिएको थियो । गीतकार सङ्घ नेपालले प्रदान गर्ने ‘वर्ष गीत पुरस्कर’ यो बर्ष ‘सन्तानको शिर उठाउन हजार ठाउँ शिर झुकाउने बाबालाई बिर्सिएर…’ गीतबाट उनलाई ५१ हजार र सम्मानपत्रले सम्मान गरिएको हो । यो गीतमा सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत र मनोज राजको स्वर रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: १३ असार २०७६, शुक्रबार १०:४४